Ikhabethe le-biosafety & igumbi elihlanzekile Abakhiqizi - China Biosafety cabinet & igumbi elihlanzekile abahlinzeki & Factory
I-ZR-2021 Isampula yesampula yokugeleza okukhulu okuhamba emoyeni isetshenziswa ekuqoqweni kwamagciwane asemoyeni. Umkhiqizo ufakwe izigaba eziningi zamakhanda okusampula, ungaqoqa i-aerosol futhi ususe izinhlayiya ezinkulu kuno-12 μm futhi zincane kuno-2 μm njengothuli, impova nokunye. Qoqa izinhlayiya ezihogeleka phakathi kuka-2μm kuye ku-12 μm bese ugxila ekuhambeni komoya okuncane, bese uqoqa ngu-porton sampler.
I-ZR-2050A sampler microbe sampler iyinhlangano esebenza kahle kakhulu esiteji esisodwa isampuli yokuvula umgodi eminingi, le nsimbi isekela kumgomo wokuthinta u-Anderson, isivinini esinegalelo lingu-10.8 m / s, ingabamba zonke izinhlayiya ezinkulu kune-1 1μm. Le nsimbi izodonsa umoya ngokusebenzisa ikhanda lesampuli lesikhala esivulekile, umthelela ku-Φ90mm petri dish, amagciwane asemoyeni azobanjelwa endaweni eyi-agar medium. Leli thuluzi lisetshenziswa kakhulu embonini eyenza imithi, imboni yokudla, isikhungo sokuhlola izidakamizwa, izikhungo zokulawulwa kwezifo, ezempilo kanye nokuvikela ubhubhane, izibhedlela nezinye izimboni neminyango ehlobene nayo